4 Mfe Nzọụkwụ iji Hichapụ Chakwasa ihie Search History na iPhone
Ọ na-eme mgbe niile na mgbe ọ bụla ị na-agbalị iji Chakwasa ihie na iPhone ịchọ ọmụma, o yiri n'ihi bụ otu ihe ahụ, na ọbụna ụfọdụ ihe, dị ka ozi ederede, ị ehichapụ tupu oge eruo. Ọ bụ ya mere ndị mmadụ asị mgbe dum 'm ehichapụ ozi ederede. Otú ọ dị, mgbe m chọọ na Chakwasa ihie, ha ka bụ ndị e '. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị na-ajụ ajụjụ "otú ihichapụ Chakwasa ihie search akụkọ ihe mere eme na iPhone?"
The isi ka ihichapụ Chakwasa ihie search akụkọ ihe mere eme na iPhone na-ihichapụ achọghị Chakwasa ihie egosipụta ọmụma kpamkpam. Olee otú ime ya? Ị pụrụ ime ya aka. Ejila okwu m maka ya? Gosi ya site onwe gị. M ike ikwu na ị na-agbalị Wondershare SafeEraser ikpochapụ iPhone Chakwasa ihie search akụkọ ihe mere eme. Naanị na 4 mfe nzọụkwụ, ị ga-ikpochapụ Chakwasa ihie akụkọ ihe mere eme na iPhone mfe.
Nzọụkwụ 1 Hichapụ achọghị ozi na gị iPhone
Ka ihichapụ Chakwasa ihie search akụkọ ihe mere eme na iPhone, akpa ihichapụ ozi ị na-achọghị ka egosipụta na Chakwasa ihie search N'ihi na peeji. Chọpụta, m maara nke a adịghị arụ ọrụ na mbụ n'ihi na i nwere ike ịhụ ha na Chakwasa ihie search akụkọ ihe mere eme na ọbụna mgbe nhichapụ. Agbanyeghị, na-eme ya mbụ. Mgbe-eme dị ka 4 nzọụkwụ gị gwara gị mee, mgbe ahụ, ị ​​ga-nweta ihe mgbaru ọsọ gị.
Nzọụkwụ 2 Download na wụnye Wondershare SafeEraser na kọmputa gị
Wondershare SafeEraser bụ a desktọọpụ ngwá ọrụ. Ị nwere ike ibudata Windows ma ọ bụ Mac version na wụnye ya na kọmputa gị. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB. Ẹkedori Wondershare SafeEraser na ị pụrụ ịhụ na ọ na-achọpụta rụọ gị iPhone-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 3 ihichapu achọghị data
Pịa 'ihichapu Private Data' na-ekpe sidebar ka a usoro nyochaa na iṅomi gị iPhone.
Nzọụkwụ 4 Nhichapụ Chakwasa ihie search akụkọ ihe mere eme
Na N'ihi na peeji, ego 'ehichapụ Data' na 'Keyboard Cache'. Pịa 'ihichapu Ugbu a' iji wepụ ha si gị iPhone. Ole na ole nke abụọ, usoro a ga-okokụre. Na mgbe ahụ i kwesịrị idaputa gị iPhone si eriri USB. Pịgharịa gaa na ala Ihuenyo aka Chakwasa ihie search. Si ebe a, ọbụna pịnye ke otu isiokwu ozugbo ị mesịa na, n'ihi kwesịrị dị iche iche ma ọ bụrụ na i wepụrụ ụfọdụ kwekọrọ ekwekọ ọmụma ke nzọụkwụ 4.
Atụmatụ: mere ehichapụ ihe, dị ka ozi ederede ka na-adị na Chakwasa ihie search pụta?
Zaa: Mgbe ị ihichapụ ụfọdụ ọmụma, dị ka ozi ederede na gị iPhone, n'ebe na-adịghị ruo mgbe ebighị ebi, ma ka ụzọ ọpụpụ na gị iPhone ebe. Ọ bụ ya mere Chakwasa ihie ka nwere ike chọọ na-egosipụta na ha. Na-eji ngwá ọrụ ka ihichapụ ọmụma kpam kpam site na gị iPhone, ọ ga-egosi na Chakwasa ihie search.
Cheta na: ụkpụrụ ka ihichapụ Chakwasa ihie search akụkọ ihe mere eme na iPhone etinyere m n'isiokwu a bụ ka ihichapụ keyboard cache na-achọghị na ọmụma ozugbo egosipụta na Chakwasa ihie search N'ihi na peeji. Mgbe ahụ, Chakwasa ihie search ga-akpaghị aka melite results, na-egosipụta na ị na ọmụma ọhụrụ.
> Resource> Ihichapu> Mfe Nzọụkwụ iji Hichapụ Chakwasa ihie Search History na iPhone